दलान नेपाल : मधेशमा भाजपाको सम्भावित प्रभाव
मधेशमा भाजपाको सम्भावित प्रभाव
at 12:26 AM Posted by Dalan
भारतीय निर्वाचनको परिणामलाई लिएर नेपालमा पनि विभिन्न कोणहरुवाट विश्लेषणहरु भईरहेको देखिन्छ । अभुतपुर्व रुपमा नरेन्द्र मोदीको प्रभावमा भाजपाले ल्याएको सफलतालाई नेपालको धर्म निरपेक्षता देखि संघीयता सम्मको मुद्धालाई जोडेर वढी चर्चा हुने गरेको देखिन्छ । कतिपयले भारतमा भाजपाको उदयसंगै नेपालमा हिन्दूवादी अभियानहरु वढी सशक्क्त रुपमा अघि आउने वताउने गरेका थिए र छन पनि । तर भारतीय प्रभाव नेपालमा त्यतीकैमा सिमीत नभएको कुरा पनि सबैले राम्ररी बुझेकै छन । विश्वकै सबै भन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक अभ्यासको रुपमा भएको भारतीय निर्वाचनमा भारतका ८१ करोड मतदाताले धर्मीकता भन्दा पनि विकासको एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेर नरेन्द्र मोदीलाई मत दिएका हुन । भारतीय नागरिकहरु विकासको लागी मोदी देशको कमान सम्हाल्न दिएको वेला उनले छिमेकी देशमा किन धर्मको मुद्धालाई प्राथमिकतामा राख्लान ? एकथरीे विश्लेषकहरु त्यस्तो सम्भावना अत्यन्तै न्युन देखन्छन । वरु सम्रग नेपालको राजनिती हुदै हालैको केही बर्ष देखिदेखि सशक्क्त भुमिकामा आउन थालेको मधेश राजनिती भित्र यसको प्रभाव र प्रयोगहरु विभिन्न स्वरुपमा देखिन सक्छ । त्यसो भए मधेशमा भाजपा सत्ताको प्रभावहरु कस्तो पर्ला त ?
शुक्रवार राती दिल्लीमा भारतीय निर्वाचनको परिणाम घोषणा भईरहेको नेपालमा पनि कम चोसो थिएन । शनिवार विहानै यो पंक्तिकारलाई एकजना मधेशी सभासदले चिया खान आफनो निवासमा बोलाए । विहान ९ बजे तिर उक्त सभासदको निवासमा यो पंक्तिकार पुग्दा त्याहा मिठाई वितरण गरेर ती सभासद खुशी साटासाट गर्दै थिए । दोस्रो संबिधानसभाको निर्वाचनमा पराजय भोगेका मधेशी पार्टीहरु मानौ भारतीय निर्वाचनमा भाजपाले ल्याएको अप्रत्यासी मत जस्तै विजय हासिल गरेको अनुभुती त्याहा देखिथ्यो । ती सभासदले भन्दै थिए, नवीनजी अवको चुनावमा हामी पनि याहा यसै गरी एकछत्र छाउने गरी नतिजा ल्याए कस्तो हुन्थ्यो होला ? गएको मंसीरमा भएको दोस्रो संबिधानसभाको निर्वाचनमा मधेशी पार्टीहरुले लज्जाजक पराजय भोगेका थिए, आज भारतमा जसरी काग्रेसले भोगेका छन । कतिपय मधेशी नेताहरुले आफुहरुको हार भनेको भारतकै हार भएको सावंजनिक टिप्पणी समेत गरे । नेपाली निर्वाचनसंग जोडिएको यी र यस्ता कुराको चर्चा मधेशमा केही समय यता खुव सुन्ने गरिन्छ ।
यस पृष्टभुमीको आधारमा भन्ने हो भने भारतीय सत्ताको यो परिवर्तनलाई मधेशको एउटा ठुलो तप्का निर्वाचन पश्चात प्रतिक्षा गरेर बसेका थिए । उनीहरुको बुझाईमा भारतीय काग्रेसी सत्ताले नेपालमा काग्रेस वाहेक अरु कसैको हित सोच्दैन्न । नत उनीहरु संघीयताको नेपाल सन्दर्भमा साकारात्मक थिए । तर के नेपालको संघीयताको सन्दर्भमा भाजपा भारतीय काग्रेस भन्दा वढी फराकिलो भएर समर्थन देला ? यी र यस्ता प्रश्नहरुको उत्तर अबको केही महिना पछि मात्रै थाहा हुने छ । किनकी भाजपाले काग्रेसी सत्ताको विदेश नितीलाई पुर्णतह असफल विदेश नितीको संज्ञा दिएका थिए । हाल केही विश्लेषणहरुमा भनिदैछन कि भारतको नेपाल नितीमा खासै परिवर्तन आउदैन । तर यो पंक्तिकार उक्त कुरामा विशवस्त छैन । हा,े माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक नपर्ला वरु त्यस सन्दर्भमा थप कडा निती नै उनीहरु अपनाउलान तर मधेश राजनितीको सन्दर्भ देखि अन्य कयौन प्राथमिकतामा भारतीय दृष्टिकोणमा व्यापक फेरवदल हुन सक्छ ।
सन्दर्भ र विगतलाई केलाउदै जाने हो भने मधेश राजनितीको जग निर्माणमा भाजपा र त्यस संग समर्थित हिन्दू स्वयंसेवक संघको ठुलो भुमिका देखिन्छ । मधेश आन्दोलन भन्दा केही पुर्व भएको गोरखपुर बैठक होस वा त्यती वेला उपेन्द्र यादवले त्याहा प्राप्त आर्थिक सहयोग कसैवाट लुकेको कुरा होइन । खाली परिवर्तीत समयको सन्दर्भ र पात्रहरु फरक पर्न सक्छ । उपेन्द्र यादवको यनीहरुको ब्लायलिस्टमा धेरै पहिला नै परिसकेका छन । महन्थ ठाकुरले गएको दोस्रो संबिधानसभाको निर्वाचनमा त्याहावाट गोप्य रुपमा राम्रै भाउ पाएका थिए । पहिलो संविधानसभा रहुन्जेल उक्त सर्कलमा राम्रै महत्व राख्ने विजय गच्छदार केही कारणवस अचेल ओझेलमा परेको देखिन्छ भने शरदसिंह भण्डारी देखि जयप्रकाश गुप्ता पनि विशवस्त माध्यमकै रुपमा अहिले पनि छन । तर रोचक तथ्य के छ यी शिर्ष नेताहरुको समानान्तरमा दोस्रो तहका नेताहरु पछिल्ला केही समय यता उनीहरुको सम्पर्क तथा प्रभावमा वढी देखिन थालेका छन । जसले नेपालमा भारतीय दुतावासको गतिविधी लाई समेत साकारात्मक रुपमा लिने गरेका थिएन । र तीनीहरुको यस्ता गुनासालाई दिल्लीको काग्रेसी सत्ताले पनि खासै ध्यान महत्व दिएनन । भाजपावालाहरुले भन्ने गर्थे, हामी पनि नेपालको सन्दर्भमा यस्ता गुनासाहरु नआउन भन्ने चाहन्छु । तर हामी अहिले निर्णायक भुमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था छैन । र अब भाजपा ती निर्णयक भुमिकामा आएको वेला हिजो गुनासा गर्ने हरु फेरी त्यसमा परिवर्तनका लागी दौडधुप नगर्ने कुरा नै आउदैनन किनकी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो नेपालको राजनितीमा भारतीय दुतावास कति शक्तिशाली हुन । र हुन सक्छ, बाहिर नदेख्ने गरी काठमाडौ स्थित भारतीय दुतावासमा व्यापक परिर्वतन हुन सक्छ । जसले प्राथमिकता देखि पात्रहरु सम्मको छनौटमा व्यापक हेरफेर गर्न सक्छ । र यसकै प्रतिक्षमा छन मधेश राजनितीमा लागेको एउटा ठुलो जमात ।
दोस्रो संविधानसभाको समानुपातिकमा भएको मधेशी नेतृत्वको व्यापार पश्चात मधेशी पार्टीहरुको दोस्रो तहको प्राय जसो सबै नेताहरु मधेशमा नयां शक्तिको कसरी बनाउने भन्ने मन्थनमा जुटिसकेका छन । जुन चाडै बन्न लागेको नयां भारतीय सत्तासंग कुनै न कुनै रुपमा केही पहिला देखि नै छलफलरत छन । र अहिले केही समय प्रतिक्षा गर्नै पर्छ कि पहिला भारतमा नयां बन्ने सरकार र तीनले विदेश र खासगरी छिमेकी मुलुकहरुको सन्दर्भमा कस्तो टिम बनाएर अघि वढने छ । मधेशमा भाजपाको अर्को प्रभाव मिथिला आन्दोलनमा समेत झल्कन सक्छ । किनकी विहारमा गएको केही बर्ष यता मिथिला आन्दोलन व्यापक रुपमा फैलिदै आएका छन । र विहारमा भइरहेको मिथिला आन्दोलनलाई भाजपा र नरेन्द्र मोदीले व्यक्तिगत रुपमा राम्रै मलजल गर्न खाजेको देखिन्छ । किनकी बिहारका हालका मुख्यमन्त्री नितिशकुमार संग नरेन्द्र मोदीको ठुलै राजनितीक दुश्मनी रहेको कुरा कसैवाट लुकेको छैन । पछिल्लो केही वर्ष यता विहारमा भाजपासंगै गठवन्धन गरेर सरकार चलाईरहेका नितिशकुमार एक बर्ष अघि नै उक्त गठवन्धन तोडेका थिए । जवकी नरेन्द्र मोदीसंगको विवाद त्यो भन्दा पहिला देखि नै नितिशको चल्दै आएका छन । त्यसैले होला नितिश विरुद्धको सशक्क्त हतियारको रुपमा मोदी र भाजपाले मिथिला आन्दोलनलाई लिने गर्छन । जुन अबका दिनमा झन वढी मुखरीत भएर आउने सम्भावना हुन्छ । र त्यसको प्रभाव नेपालमा समेत जारी मिथिला आन्द्योलनमाथी पर्नेमा कुनै दुईमत छैन । जसले नेपालमा जारी संघीयताको बहसलाई समेत राम्रैरी नै प्रभावित गर्ने छन । यद्यपी नेपालको मिथिला आन्दोलनले अहिले सम्म राजनितीक संगठनको रुपमा कुनै स्वरुप ग्रहण गर्न सकेको छैन । तर मधेशी नेतृत्वको असफलता र विभिन्न अभियानको नाममा जारी मिथिला आन्दोलन यदी कुनै प्रकार राजनिती संगठनको स्वरुप ग्रहण गर्न गयो भने त्यो समेत कुनै अनौठा घटनाक्रम हुने छैन ।